Yoolalka cusub iyo Istaraatiijiyada Waxbarashada
Kadib markaad si taxadar leh u fiirsato, Machadka McKnight wuxuu ku faraxsan yahay in uu la wadaago bartilmaameed barnaamij cusub oo leh tabo cusub oo loogu talagalay barnaamijka Waxbarashada.
Ujeeddada Barnaamijka: Si loogu diyaariyo ardayda Minnesota inay ku guuleystaan bulshada adduunka oo sii kordheysa iyagoo maalgashanaya barayaasha, awood u siinta qoysaska, iyo dhalinta dhalinyarada. Himiladani waxay kor u qaadaysaa sinnaanta waxbarashada waxayna ka koobantahay ganacsiga iyo kiisaska madaniga ah si loo hubiyo in ardayda Minnesota ay ku guuleystaan. Waxaan rabnaa in caruurtu ka soo baxaan nidaamkeena iskuulkeena oo loo diyaariyey in ay ku soo baxaan dhaqaale tartamaya, dhaqaale ahaan caalami ah iyo in ay si macno leh ugu dheehan tahay mujtamaca bulshada ee nolosheena bulshada.
Xeeladaha Barnaamijka: Si loo gaaro hadafkan, McKnight wuxuu:
Qulqulka dhuumaha barayaasha waxtarka leh iyada oo la taageerayo dadaallo cusub oo lagu diyaarinayo, la qoro, lana haysto tayada sarraysa, tayada kala duwan ee dugsiyada Minnesota;
Xoojinta qoysaska maaddaama ugu doorka ugu fiican ee nidaamka waxbarashada ay isbaddalaan qoysaska taageeraya inay u ololeeyaan sidii loo hagaajin lahaa siyaasadaha iyo habdhaqanka gobolka, gobolka, iyo gobolka.
Sida aan u horumarinnay Istaraatiijiyooyinkan
McKnight waxa uu yimid hadafkan iyo istaraatiijiyooyinkan iyada oo loo marayo geeddi-socodkii is-barbardhiga iyo ka-qaybgalka wada-shaqayneed ee bilaabmay Bishii Nofembar 2016. Taasina waxay ahayd markii ay Guddiga Agaasimayaashu samaysay go'aanka adag ee qorraxda Barnaamijka "Pathway Schools", wadashaqeyn sanado badan u dhexeeya McKnight, dooro dugsiyada ku yaal Minneapolis-St. Booska Booska, iyo Jaamacadda Machadka Magaalooyinka Chicago.
Go'aanka wuxuu siiyey McKnight fursad ay dib ugu noqoto hadafyada iyo istaraatiijiyadaha waxbarashada guud. Waxaan is weydiinay nafteena: Maxaan ka baranay waayo-aragnimadii hore ee noo sheegi kara shaqadayada mustaqbalka? Sidee bay ufududeyneysaa mabaadii'da waxbarashada ee Minnesota tan iyo markii aan barnaamijka waxbarashada bilaabnay 2009? Waa maxay fursadaha cusub ee McKnight ka faa'iideysan karo si kor loogu qaado sinnaanta waxbarashada gobolka?
Waxaan lix bilood ku qarashgaraynay xogta iyo cilmi-baarista, oo ka tarjumaysa waayo-aragnimadayada, iyo - ugu muhiimsan - in lala xiriiriyo barayaasha, waalidiinta iyo u-doodayaasha Minnesota oo dhan si ay u fahmaan waxa ay u arkaan inay yihiin caqabadaha iyo fursadaha muhiimka u ah gobolka.
Barayaasha iyo Qoysaska Hubi Guusha Ardayda
Laba cashar oo khatar ah oo ka soo baxay cilmi-baaristan iyo wadahadalkaas
Taageeridda isbedel waara waxay u baahan tahay isbedel nidaamsan; iyo
Waxaa jira laba qaybood oo waaweyn oo ka warhaynaya saameynta ugu badan guusha ardayga: barayaasha iyo qoysaska.
Maaddaama Minnesota ay noqoto mid sii kordheysa oo dhaqan ahaan iyo luuqad ahaanba kala duwan, waxay noqonaysaa mid sii kordheysa oo ah in aan ka takhalusno fursadaha dawlad-goboleedka. Tani waxay dhici kartaa oo kaliya haddii aan wax ka beddelno nidaamyada leh farqiyada u dhaxeeya taariikh ahaan. Xeeladaha cusub ee McKnight waxay qaadanayaan qaab gudaha ah si loo hormariyo isbedelka nidaamka isdhexgalka. Iyada oo la maalgashado barayaasha, waxaan u gudbin karnaa tayada tayada sare leh nidaamyada waxbarashada - ka caawinta inay ka fiicnaadaan gudaha. Xoojinta qoysaska, waxaanu gacan ka geysan karnaa sidii loo kicin lahaa cadaadiska rabshadaha leh ee isbeddelka ka yimaada dibadda nidaamyadan.
Cilmi-baaris badan ayaa muujinaysa in macallimiinta iyo hoggaamiyeyaasha dugsiga ay metelaan dugsiga ugu horreeya iyo kan labaad ee muhiimka ah ee dugsiga ee ku-guuleysiga ardayga. Si macquul ah kor loogu qaado tayada waxbarashada carruurta ayaa waxay u baahan tahay hagaajinta tayada macalimiinta u adeega. Intaa waxaa dheer, caruurtu waxay ka faa'iideystaan marka ay macalimiintoodu ka tarjumaan kala duwanaanta fasalka. Si aad u soo qaadatid hal tusaale, cilmi baarista Johns Hopkins wuxuu ogaadaa in wiilasha madowga ah ee dakhliga yar ee leh ugu yaraan hal macalin madow oo dugsiga hoose ah ay yihiin boqolkiiba soddon iyo sagaal boqolkiiba ay ka yar tahay inay ka tagaan dugsiga sare. Gaadiidka qorista iyo ilaalinta tayada tayada leh, barayaasha kala duwan ayaa ka mid ah tabaha ugu muhiimsan ee saameynaya tayada macalimiinta iyo hoggaamiyeyaasha Minnesota.
Intaa waxaa dheer, waxaanu dooneynaa inaan sare u qaadno codadka qoysaska iyo beelaha wada hadalka dib u habeynta waxbarashada. Sababtoo ah ardayda, dugsiyada, qoysaska iyo jaaliyadu si aad ah u dhexgalaan, horumarinta dugsiyadu waxay noqon doonaan kuwo waari kara haddii la horumariyo oo lagu fuliyo wada-shaqeyn dhow oo lala yeesho qoysaska iyo beelaha ardayda. Inkasta oo dadaallada ka qaybgelinta qoysku ay inta badan bilaabaan iyagoo ka caawinaya waalidiinta inay taageeraan carruurtooda shakhsi ahaaneed, qoysasku waxay sidoo kale noqon karaan kuwo isdhexgaleya oo muhiim ah iyo u doodayaasha xoogga leh ee ka jira dugsiga iyo heerka nidaamka. Haddii qoysasku si macquul ah u hawlgalaan oo loo abaabulo qaybaha ugu kalsoon ee nidaamka waxbarashada, waxay awood u yeelan karaan awoodooda wadajir ah si ay u horumariyaan isbedelka nidaamyada.
Maaddaama barnaamijka Waxbarashada dib loo eegay, waxaan sii wadi doonnaa dhageysiga iyo barashada lammaanayaasha ka jira beelaha kala duwan ee Minnesota, waxaanan sii wadi doonaa inaan nadiifino habka aan uga jawaabno wixii aan maqalno oo aan barano.
Dhisidda Horumarka Hore
Waxaan sidoo kale aqoonsannahay in go'aan kasta uu leeyahay ganacsiga, iyo go'aanka McKnight ee ah in la sii wado xeeladaha barnaamijka cusub ee loo baahan yahay in la sameeyo qaar ka mid ah kuwa adag. Barnaamijka Waxbarashadda ee la isku qurxiyo, McKnight wuxuu sii wadi doonaa dhiirrigelinta ka qaybgalka dhalinyarada iyada oo loo marayo taakuleynta dhalinyarada, miisaaniyadda McKnight ee la aasaasay 2010. Si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, si tartiib tartiib tartiib ah ayaan uga fogaanaynaa diiradeena taariikhda waxbarashada carruurnimada hore.
Waxaan aqoonsanahay muhimada muhimka ah ee hubinta in ilmo kasta uu helayo fursado waxbarasho oo hor leh oo tayo sare leh. Safarka si uu u gaaro aragtida this ee Minnesota ma ahan mid ka weyn, laakiin waxa ay samaysay horumar wanaagsan. Tobankii sano ee la soo dhaafay, gobolkayagu wuxuu arkay caruurnimada hore si ay ugu socoto ajandaha dadweynaha, iyada oo boqollaal milyan oo doollar ay ku maalgeliyeen ballaarinta gelitaanka ilmanimada hore iyo kor u qaadista tayada barnaamijyada caruurnimada hore. Aaladda xooggan ee u doodayaasha ilmanimada hore iyo maalgeliyeyaashu waxaa ka go'an inay hubiyaan in marin-u-helka ilmanimada hore iyo tayada ay tahay mudnaanta gobolka. Oo waxaa muhiim ah in aan abuuro shuruudo horay loo soo mariyey ilmanimada hore oo lagu xoojiyay khibradaha tayo sare leh ee K-12. Inta badan, Minnesota, taasi ma aysan aheyn. Xeeladaha McKnight ee cusub ayaa gacan ka geysan doona sidii loo xoojin lahaa iskuulada Minnesota si ay ugu guuleystaan guulaha laga gaaray fursadaha waxbarasho ee hore. Maaddaama aynu diiradda diirada saarno, waxaanu ku faraxsannahay oo ku niyad jabay guulaha ay gaareen lamaanaheena carruurnimada hore, waxaanan ku faraxsannahay shaqadooda sii socota.
Raadinta mustaqbalka leh Optimism
Marka aan bilowno horumarka cusub ee barnaamijka Waxbarashada McKnight, waxan rajeyneynaa saameynta ay leedahay istaraatiijiyooyinkan ay ku yeelan karaan caruurta Minnesota. McKnight wuxuu rajeynayaa in uu sii wado inuu sii wado la shaqeynta lamaanayaasha hadda jira - iyo in lagu dhiirigeliyo kuwa cusub - si loo hubiyo in carruurta Minnesota ay si buuxda u diyaargaroobaan inay dugsiga ku guuleystaan maanta iyo bulshada berrito.